Warbixin Murugo leh oo laga soo saaray Xasuuqa Itoobiya & Kenya ku hayaan shacabka Soomaalliyeed | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home Wararka Maanta Warbixin Murugo leh oo laga soo saaray Xasuuqa Itoobiya & Kenya ku...
Warbixin Murugo leh oo laga soo saaray Xasuuqa Itoobiya & Kenya ku hayaan shacabka Soomaalliyeed
Warbixin laga sii daayay VOA-da ayaa muujineysa sida ay dowladaha Itoobiya iyo Kenya dhibaato ugu geystaan shacabka Soomaaliyeed.
Kenya iyo Itoobiya ayaa wax caadi ah ka dhigtay xasuuqa ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo ku mar marsiyoonaya la dagaalanka AlShabaab iyo iney xaduuda dalalkooda ka difaacanayaan kooxdaas.
Xogtan oo ay soo aruurisay VOA qeybteeda afka Soomaaliga ayey ku ogaatay inay dowladda Kenya ilaa tobanaan duqeyn u geysatay meelo ay dagan yihiin dad Soomaaliyeed oo rayid ah, waxayna duqeyntaas bilaabeen June 2015, waxaana warbixintaan soo daabacay markii ugu horeysay hey’adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya, waxayna duqeyntaas inta badan ka geysatay Gobolka Gedo.
Sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa xasuuq u geysatay shacabka Soomaaliyeed iyadoo u mareyso ciidamada Liyu Police, kuwaas oo xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya ka sameeyey falal isugu jiray dilal iyo kufsi ka dhan ah xuquuql insaanka.
Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa lagu dhaleeceeyey inaysan hal mar xataa ka hadlin xasuuqa ay dowladaha Itoobiya iyo Kenya ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, taasoo ah mid ceyb weyn ku ah, waxaana halkaas ka muuqato inaysan dowladda Soomaaliya ee uu hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aysan dhibaato ku heyn dhigga shacabka Soomaaliyeed ee sida gardarada ah loo daadinayo.
Kaliya dowladda Soomaaliya kama aamusin dhibaatada ay gudaha ka wadaan Kenya iyo Itoobiya, sidoo kala si daacad ah ugama hadlin xasuuqii loo geystay qaxootigii Soomaaliyeed ee lagu xasuuqay duqeyntii loo geytay doontii ay saarnayeen ee mareysay xeebaha dalka Yeman.
Dadka falanqeeyo siyaasadda ayaa aaminsan in ka aamusidda dowladda ee xasuuqa shacabka ay keeni karto inay lumiso kalsoonidii ay ummadda Soomaaliyeed ku qabtay dowladda cusub oo laga rajeenayey inay noqoto middii ugu fiicneyd oo soo marta Soomaaliya.
Waxayna ugu baaqeyn dowladda inay go’aan cad ka qaadato xasuuqa shacabka Soomaaliyeed loogu geysanayo gudaha ee banaanka Soomaaliya, maadaama ay tahay dowladda looga fadhiyo inay shacabkeeda si fiican ugu adeegto.
Warbixintan ayaa kusoo aadeysa xili diyaaradaha Kenya ay duqeyn joogta ah ka wadaan deegaanada Gedo iyo Jubbooyinka oo xaduud la leh dalkaas, halka dad kalana siyaabo kala duwan loogu laayo gudaha Soomaaliya
Previous articleCiidamada Itoobiya Leego ugu geeriyoodeyn askar farabadan
Next articleDeg deg :” Labo Qof oo lagu dilay Marka, Xaaladda oo…